सेलो आयल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? सावधान ! – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 1557
सेलो आयल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? सावधान !
सुर्यमुखीको बिउसँगै किरा फ्टयाङ्ग्रा पनि पिसिन्छ
Janacharcha.com शनिबार, कार्तिक ०९, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, कार्तिक ९
बागमती आयल ईण्डसट्रिजको उत्पादन सेलो सनफ्लावर आयल (सूर्यमुखी तेल)मा अखाद्यय वस्तु मिसावट भएको पाईएको छ । मोरङको कटहरी गाउपालिकामा रहेको उक्त उद्योगमा तेल बनाउन प्रयोग गरिने सुर्यमुखि फुलको बीउसँगै कीरा, फ्टयाङ्ग्रा समेत मिसिएको पाईएको छ । त्यससँगै बिउमा मुसा, छुछुन्द्रा लगाएत जिवजन्तुको विष्टा दिशा समेत मिसिएको भेटिएको छ ।
बिउमा मिसिएका फोहरहरु
तेल बनाउदा उक्त उद्योगले बिउलाई समान्य सरसफाई समेत नगरी कीरा, फ्टयाङ्ग्रा र अन्य जिवजन्तुको विष्टा सिहत पिसाउने गरेको पाइएको हो । त्यसका साथै बिउमा धुलो, माटो र कट्कीका प्रशस्तै टुक्रा टुक्रिहरु समेत भेटिएका छन् ।
संचालक विवेक राठी
साहकारीले खान मिल्ने कि नमिल्ने ?
सेलो आयल नेपालका वैष्णव, प्रामणी, जैनी जस्ता किहल्यै मासंआहार ग्रहण नगर्ने धर्मालम्बीहरुले समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर यसरी किरा फट्याङग्रा सहित पिसिएको तेल साहकारी हो वा मांसहारी ? यस्तो तेल धार्मिक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने मिल्ने वा नमिलने, यो सोचनिय विषय बनेको छ ।
धार्मिक व्यक्तित्वले मात्र नभएर समान्य मानिसको मनले पनि त्यस्तो तेल खान रुचाउदैन । त्यसमाथि धुलो मैलौ फोहर र मुसा तथा अन्य जिवको विष्ट मिसिएको तेल सेवन गर्नु स्वास्थयको लागी पनि लाभदायी होइन ।
उपकरणमा फोहरको लेदो
उक्त उद्योगको तेल पिस्ने उपकरणहरु समेत निकै फोहर छ । बिउ पिस्ने मिसिनमा फोहरको लेदो जमिसकेता पनि वर्षौ देखि साफा गरिएको छैन् । उद्योगले सोही लेदोसँगै बिउहरुलाई पन्ने गरेको पाईएको छ ।
सेलो आयलको उद्योगमा सरसफाईको कुरालाई फिटिक्कै ध्यान दिएको पाईन्दैन् । कामदारले चप्पल लगाएरै विउमा टेकी रहेका हुन्छन् । सोही विउलाई पछि तेल बनाउन प्रयोग गरिने गरेको छ ।
उक्त विषयलाई लिएर सरकारका नियामक निकायहरुले खासै चासो दिएको पाईदैन् । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, नेपालको प्राय सवै तेल उद्योगहरुमा यस्तो किसिमको लापरवाही भईरहेको स्रोतको दावी छ ।
चप्पल लगाएरै विउमा